PressReader - Ilanga: 2018-11-26 - PHILANI MGWABA
Ilanga - 2018-11-26 - Bono - [email protected]
KUNENKOLELO kwabanye bethu yokuthi uhulumeni kufanele afane nomuntu ongubaba nomama kithina, asenzele yonke into esiyidingayo, ngisho naleyo abantu abangakwazi ukuzenzela ngokwabo.
Yingakho nje ngisho nasemakhaya, ezindaweni lapho abantu kade bezakhela khona izindlu zabo, uhulumeni manje esebakhela izindlu zomxhaso. Nosopolitiki nabo, ukuzizuzela amavoti ngesikhathi sokhetho, bayayikhuthaza le nkolelo yokuthi abantu babheke uhulumeni emehlweni, bafune ukwenzelwa izinto.
Ngike ngahambela umcimbi othile endaweni yasemakhaya engaphansi kwenkosi yendabuko eningizimu yeTheku, ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Empeleni kuyaye kungithokozise ukuphuma edolobheni, ngihambele ikakhulukazi izindawo zasemakhaya ngoba kuyangikhumbuza ukuthi impela lihle izwe lethu esaliphiwa nguMvelinqangi.
Noma ngibuqaphelile lobu buhle ohambeni lwami lwangempelasonto edlule, kodwa okungijabhisile wukubona ukuthi noma abantu benawo umhlaba omningi futhi obukeka umuhle ukuba bangalima bakhiqize inqwaba yokudla, kodwa amasimu alele imbuya, kazibonwa ngisho izivande zotamatisi eduze kwemizi.
Lokhu kuyashaqisa impela esikhathini lapho abantu bekhala ngokwentuleka kwemisebenzi, isimo somnotho sisibi.
Okunye futhi okuphule umoya wukubona isimo esingesihle sehholo lomphakathi, lapho lo mcimbi ebengiwuhambele obewenzeka khona.
Ukukha nje phezulu, leli hholo, elakhiwa wuhulumeni waKwaZulu-Natal ngemali yabakhokhi bentela, belingenalo ngisho elilodwa iwindi ebelingafile, kanti nopende kalisawazi.
Umbuzo ovelayo uthi; kungani amalungu omphakathi wakule ndawo angasinakekeli isakhiwo somphakathi esakhelwe ukusiza wona?
Kungani engenzi lutho ukunqanda ukuphihlizwa kwamawindi yizigangi, isakhiwo size sibukeke njengomhhume wabaphangi?
Eduze kwaleli hholo, kunomuzi wenkosi yendawo; ngabe yona ithule ithini izinto zonakala phambi kwayo, endaweni engaphansi kwayo?
Kungenzeka ukuthi ukungayikhathaleli impahla yomphakathi kudalwa wukuthi imali yokuyakha isuke ingaphumanga emaphaketheni abantu bendawo, kodwa yakhiwe wuhulumeni.
Phela kujwayelekile ukuthi uma into ungayijulukelanga, ungabi nandaba nayo, okuwumkhuba ohlehlisela emuva intuthuko yomphakathi.
Uma sengibuyela kolomhlaba ongasetshenzwa, uma amapulazi abalimi abamhlophe engabuyela ezandleni zethu - okuyinto enhle - njengoba kuhlongozwa ukuchitshiyelwa komthetho ephalamende wokudliwa komhlaba ngaphandle kokukhokhwa kwesinxephezelo, ngabe la mapulazi ayosetshenzwa ngubani, kuyokhiqizwa pho ukudla uma ubuvila bubhoke kangaka ezweni?
Yebo, kufanele impela ukuba kube nobulungiswa ngokwabiwa komhlaba, nabamnyama abangabokudabuka kuleli bahlomule, bakwazi ukuba ngabalimi abavelele abakhiqiza ukudla okuthunyelwa ezimakethe, ngisho nasemazweni angaphandle imbala.
Nokho kuyokwenzeka lokhu kuphela nxa la mapulazi abelwa kuphela abantu abazimisele ngokuwusebenza umhlaba, bangawuyekeli uphenduke amanxiwa.
Eminyakeni edlule, ngaphansi kukahulumeni omdala waKwaZulu, kwakunabeluleki bezolimo nezinhlelo zokusiza abantu ukuba basebenze umhlaba wabo, bazondle bona.
Ngabe zisekhona lezo zinhlelo ezazinemiphumela emihle yokunika abantu ulwazi lokuzenzela bona izinto, bangakhangezi kuhulumeni?
Uma zisekhona, kufanele zikhuthazwe, zisatshalaliswe kuso sonke isifundazwe, ngisho emalokishini imbala, ukuze labo abazimisele ngokusebenza, bathole ukwesekwa okufanele.
Usemkhulu umsebenzi osahlalele ukwenziwa kuleli lizwe, wokukhuthaza ukuzimela kubantu, okuyokwenzeka kuphela nxa befunda ukuzenzela izinto, baziqhenye ngokuzakhela okwabo.